ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တပင်တည်း ရင်ထဲက ကြံဖွံ့”
Nice post. Ko Paw.
ကြံဖွတ်စည်းရုံးရေးမှုးတွေကို ကြံဖွတ်အဖွဲ့ ဝင် တဦးတိုးရင် လီကွမ်ယူ.. အဲလေ.. န.အ.ဖ က တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပေးလဲ မသိဘူးနော်...
ဒီတစ်ခါတော့ ဆုံးအောင် မဖတ်ဘဲနဲ့ ကွန်မန့်ရေးသွားပါတယ်။ နည်းနည်း ဖတ်လိုက်တာနဲ့၊ ဘယ်အဆင်ဆိုတာ သိပါတယ် ခင်ဗျား။
ဆြာပေါလည်း တော်တော်ကို ဝါစာကမာ လုပ်ရတာပဲနော်။ ငြင်းကြ ခုန်ကြပြီဆို နိုင်ချင်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ဆြာပေါကို တစ်ခု ထောက်ပြခဲ့ပါမယ်။ အရင်က ကိုပေါရဲ့ အဓိက ပြစ်မှတ်က နအဖ၊ နောက်တော့ စလုံး အစိုးရ၊ လောလောဆယ်တော့ နိုင်ငံသားပြောင်းသွားတဲ့ မြန်မာတွေ၊ နောက်တော့ ဘာဖြစ်မယ် မသိ။
ဆြာပေါ ကြားထဲမှာ ရေးတဲ့ “မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ ကြီးမားသူများအကြောင်း” ဆို တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း နောက်လာဖတ်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
I support you, Ko Paw. You and Yangon Thar Tar Tay from Irrawaddy are my favouriate writers. I hope to read more. Please Carry on.
ကိုပေါရယ် ချေးအကြောင်း သိပ်မပြောပါနဲ့။ Recycle လုပ်ထားတဲ့ရေ ၂.၅% ပါတဲ့ရေ သောက်နေရတာ။ ခေတ်များမကောင်းလို့ကတော့ % တွေ ပိုများလာနိုင်တယ်။ :)
hahaha... kg tal byoe:
ကိုပေါရဲ့ ပစ်မှတ်ကတိမ်းစောင်းတယ်လို့ မမြင်မိပါဘူးဗျာ တစ်ခုတည်းပစ်နေတာ အဲဒါ စောက်သုံးမကျတဲ့ မြန်မာ့စစ်တပ်ကိုဘဲဆိုတာ ထင်းကနဲဘဲ
to: anon 10:24
idiot guy, happy to hear that u never come again.dont write anymore comment as yr saying.
chee hte` ka lauk kaung chee hte mher be` nay per.
Anonymous (August 25, 2009 10:24 PM )
ဂျာ.... တားတား ဘာကြောမိရို့လဲ....
ဟောဒီက တားတားရေးရဲ့ ပစ်မှတ်ဟာလေ... တပင်တည်း ရင်ထဲက ကြံဖွတ်ပါလို့....
ဟာပဲ... ဟာပဲ.... ဟာပဲ.... ကို။ ပြောထားရက်သားနဲ့။ ငိုချင်လာပြီနော်... ရွှတ်။
I absolutely agree with you on citizenship issue. Bravo!!!!!
Sao Sam Tip said...
Agree. Absolutely agree on citizenship issue.
ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားမှန်ရင် မဝင်မနေ ရ ဆို ပြီး နာမည် လာကောက် သွားတာပဲ မှတ်မိတယ်.. ဘာမှန်းတောင် မသိဘူး အရိုးအရင်းတောင် မကိုက်ရပါလား...
Really Nice Post, totally agree with you :D
To Paw Family
You are talking more than what you should talk. So called "Talk Big". I would like to see how you are going to handle for your new generation.
တင်ထားတဲ့ပိုစ်ထက် ကိုပေါရဲ့ ကော်မန့် က အဆပေါင်းများစွာပိုကောင်းသွားပြီ..
I nvr comment out here. But now I want to know are you "PR" here(Singapore). If not, pls ignore my question. If so, wanna know why you change to be "PR"?
Wanna explore another war.. :)
To Anonymous (August 26, 2009 12:42 PM )
Who are you to decide how much I should talk? Are you my PR manager?
From your comment, I can guess that you don't seem to understand what is all about blogging, freedom of thoughts, freedom of expression and freedom of speech.
You don't even seem to understand the about the usefulness of conversations, dialogue and communication.
Finally, you don't see to understand how to spread ideas and messages in the democratic movement.
ကိုပေါ...သိန်းမြင့်ဝင်း ရဲ့Thesis ဟုတ်ပေါင် ဘာခေါ် ရမလဲ စာတမ်း ဆောင်းပါး အီးမေးလ် အား မြန်မာလို ပြန် ရှင်းပြပေးပါရန် ။ မြန်မာလိုရေးတာတောင် နားမလည်တာ ကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပါရန်။
It's their rights. why you still thinking about them? you are the one who really care about them. you look like women. if want to talk, talk directly, don't talk indirect. I saw you on MRT with your wife. your talking style like women. your mouth is moving arround and your face like myanmar women actress when you talk.
Currently Ko Paw's target is those people convert to Singaporean because of his many classmates or competitor are converted. so he is trying to beat them up.
Thanks for recognizing me when you saw me on the MRT. And also thanks for saying that my face is likeaMyanmar actress. I take this asacompliment. By the way, which actress, Kyi Kyi Htay, Cho Pyone, War War Win Shwe, Htun Eindra Bo or Eindra Kyaw Zin?
you should write something about Daw Aung San Su Kyi married to forgeiner if you are so itchy heart to those SBB (Singaporean Born Burma).
Anonymous (August 26, 2009 2:38 PM)
Thanks for your suggestion. Who are my classmates (competitors) that converted to Sg citizens? Please let me know as I lost contact with them.
By the way, I didn't know I have competitors friends until you mentioned, ha ha.
အဲဒီ Anonymous Lee ဂျီးကလည်း...
ခလေးလိုပဲ လျှောက်လျှောက်ပြော။ ရီလိုက်ရတာ သေတော့မယ်။ ဟား...ဟား...ဟား။ သိပ်မုန်းရင်လည်း တခြားနည်းနဲ့ FIGHT ပါလားဗျား။
ဟား...ဟား...ဟား။ အဆက်မပြတ် ရယ်ပြီး ပြန်သွားသည်။
Look like Daw Khin Lay Swe when she is talking about others(Atin).
There is nothing wrong with marrying toaforeigner. It is upto the individual's choice.
yes nothing wrong but how about MyoChitSiat what you always talking about.
မိတ်ဆွေတော့ တော်တော်လွဲနေပြီ။ ကျနော့်စာတွေကို သေသေချာချာ မဖတ်တာလား။ သဘောကောင်းကောင်းမပေါက်တာလားတော့မသိ။
နိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့ သူ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ နိုင်ငံသားဝတ္တရားကျေပွန်ဖို့ မကြာခဏရေးတယ်။ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကနေ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုက်တဲ့ ကျေးဇူးတရားကို စောင့်သိဖို့ ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒကို ဘယ်တုန်းကမှ အားမပေးခဲ့ဘူး။ ရှုတ်တောင် ရှုတ်ချပါသေးတယ်။
နိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသူတဦးကို လက်ထပ်လို့ရပါတယ်။ ဥပဒေအရရော၊ လူသားဆန္ဒအရရော လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်တာနဲ့ အမျိုးမချစ်ဘူးလို့လည်း ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်မတန် ထင်ရှားတဲ့ သာဓကပါ။ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့် အမျိုးကို ချစ်တဲ့နေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်သူမှီသလဲ။ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းယူထားတဲ့ သူလိုငါလို လူတွေတွေထက် အပုံကြီးသာပါသေးတယ်။
မိတ်ဆွေ…ခွဲခွဲခြားခြား သိမြင်နိုင်ပါစေ။ အလားတူပဲ… မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားက လာသမျှ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကို လက်မခံဘဲ ငြင်းပယ်နေတာလည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ မိတ်ဆွေကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတို့ အားလုံးဟာ ပြည်တွင်းဖြစ်မဟုတ်။ နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေချည်းပဲ။
ဒီတော့ မဆိုင်ရေးချ မဆိုင်တာတွေကို ဆွဲထည့်လို့လည်း ကြောင်းကျိုးမညီညွတ်ရင်၊ အမှန်တရားမပါရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို လူတွေနားဝင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ပါကြောင်း။
Mind you Annon (August 26, 2009 2:59 PM), Daw Aung San Suu Kyi never give up her citizenship and she is still Myanmanr citizen even though she married toaforeigner.
ံ့Soe wants "never ending explanations" from your side. Or He/She may hate Daw Su. Or He/She really doesn't understand what you all are talking about. I hope that she is not from Myanmar military group. Hope so. But who knows?
I don't think he(KP) can organise well. He has no leadership skill in born.
Look at his personality, you may know obiviously.
I did mention about him previously "Big mouth, Talk Big".
He cann't bealeader for democratic movement in Singapore.
Anyway I admire prodemo activist who does really act for on and behalf of myanmar nationality.
KP, sorry for you. Till now you don't have suchaskill and capability to represent burmese people in singapore.
Very sorry to say that.
ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ် said...
ဒီမှာကော်မန့်ရေးရင်း ကွဲလွဲကြသူတွေ ရှိနေတာ တော့ဟုတ်ပါတယ်... ဟိုဘက်ကလဲ ဒီဘက်ကို ဆဲနေသူဟာ တယောက်ထဲပဲ.. လို့ထင်နေသလို... ဒီဘက်ကလဲ ... ဒီလိုပဲထင်နေတာ ကြည့်နေရတာ... ဟာသဖြစ်နေတယ်... :P
I don't see much comments in this post like previous posts. Why? :)
hey f**k*r ko paw..
u think u know so much abt citizenship and loyality..
do u understand that now u r living in 21st century?
the view on migration and citizenship has changed long ago..
thats why advanced countries accept dual or triple citizenship.
The meaning of loyalty has changed..
Even conservative india is accepting back foreign born indians..
forastarter, U should read some books or article which touch on the issue of citizenship and loyalty..
If u don’t read them, pls don’t write abt this topic..
A Myanmar Reader said...
Could you please expedite my request?
ခင်ဗျားတို့ လို တာဝန်သိတတ်တဲ့ အမတန် ယဉ်ကျေးတဲ့ မျိုးချစ်ပုဂိုလ်တွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးလိုပါတယ်.. ခင်ဗျားတို့စလုံးပြောင်းသွားတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ.. ဟီး...ဟီး .း-(